Tag: su'aalaha api | Martech Zone
Tag: su'aalaha api
Saaxiib wanaagsan iyo lataliye ayaa soo qoray su'aal aniga iyo waxaan jeclaan lahaa inaan u isticmaalo jawaabahayga qoraalkan. Su'aalihiisu waxay xoogaa diirada saareen hal warshad (Email), marka waxaan guud ka dhigay jawaabahayga dhammaan API-yada. Wuxuu waydiiyay su'aalaha ay tahay inay shirkadu waydiiso iibiyaha wax ku saabsan API-ga kahor intaan xulashada la samayn. Maxaad Ugu Baahan Tahay API-yada? Iskuxirka barnaamijyada barnaamijyada (API) waa iskuxirka kombiyuutarka, maktabad,